အာရုံကြောသိပ္ပံသုတေသနသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကြောင့် Reid RC၊ Carpenter BN, Fong TW (၂၀၁၁) မှ ဦး နှောက်ပျက်စီးမှုဖြစ်စေသည်ဟူသောအဆိုကိုထောက်ခံရန်ပျက်ကွက်သည် - Your Brain On Porn
neuroscience သုတေသနအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Reid RC, လက်သမား BN, Fong သည် TW (2011) ကဦးနှောက်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းတောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့ဖို့ပျက်ကွက်
အောက်ပါစာတမ်းသည်“ ပြန်ကြားချက်” ဖြစ်သည်။အပြာစာပေစွဲခြင်း - အာရုံကြောသိပ္ပံအမြင်” (၂၀၁၁) Hilton & Watts မှထုတ်ဝေသည်
ORIGINAL စက္ကူ LINK
REID, CARPENTER & FONG ၏ Hilton နှင့် WATTS ၏ပြန်လည်ခေါ်ယူမှုသို့လင့်ခ်လုပ်ပါ
Rory C. Reid,* ဘရုစ် N. လက်သမား, 1 နှင့် တိမောသေဒဗလျူ Fong သည်
အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်သူတို့ရဲ့အယ်ဒီတာ့အာဘော်ခုနှစ်တွင်ဟီလ်တန်နှင့် Watts  တစ်ဦးအဖြစ်ညစ်ညမ်းပြဿနာများကိုမိမိတို့စိတ်ကူးအပေါ်အချို့သောစိတ်ဝင်စားဖို့မှ neuroscience အမြင်များပူဇော် စွဲလမ်းစေ ရောဂါ။ သူတို့ကစှဲအဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်အချို့သော dysregulated ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အခြား maladaptive အပြုအမူတွေအကြားအတော်ကြာမျဉ်းပြိုင်, ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ အဲဒီမျဉ်းပြိုင်သိပ္ပံနည်းကျစုံစမ်းရေးခံထိုက်ပေ၏ယုံကြည်ပေမယ့်မဆိုမိလျှင်, ဟီလ်တန်နှင့် Watts ၎င်းတို့၏အမြင်များကိုထောကျပံ့ဖို့သက်သေအထောက်အထားလာအောင်, နည်းနည်းပူဇော်ကြ၏။ အဲဒီအစားအလွန်အကျွံလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် neuroscience သုတေသန၏အထင်မြင်မှားစေသောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဦးနှောက်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းအခိုင်အမာရန်အသုံးပြုကြသည်။ ကျနော်တို့သုတေသနအမှန်တကယ်အများအပြားပါလာတဲ့သရုပ်ဖော်ပုံများနှင့်အတူအကြံပြုဘာရှင်းလင်းလိုပါသည်။
ပထမဦးစွာဟီလ်တန်နှင့် Watts သူတို့နှောက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ရလဒ်တွေကိုဖော်ပြရာ "လူအပေါင်းတို့သည်စှဲဦးနှောက်, ခန္ဓာဗေဒနှင့်ရောဂါဗေဒအပြောင်းအလဲများအတွက်ဓါတုဗေဒအပြောင်းအလဲများအပြင်ဖန်တီးက"a"ကို postulate" အခိုင်အမာ။ ဘယ်လိုပေါ် မူတည်. စှဲမွဲမှု , သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီလည်းကောင်းကောင်းစွာထောက်ပံ့သည် (ဥပမာ, အရက်၏ neurotoxicity မှပေါ်ပေါက်ဦးနှောက်ကျုံ့) သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့လုံးလုံးမှန်းဆ။ လေ့လာမှုအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကိုးကားဒါပေမယ့်တွေ့ရှိချက်များ၏အနက်ကိုပိုလျှံအချို့ကိုအမျိုးအစား (ကိုကင်း, အဝလွန်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ် pedophilia) ကြောင့် cortical ကျုံ့တစ်လောကလုံးသည်နှင့်အလားတူဖြန့်ဝေကြောင်းယူဆနှင့်ထို့ကြောင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်နေကြတယ် ပုံစံ ပိုလျှံ၏ဆီလျှော်သည်။ ရုံကိုးကားလေ့လာမှုအတော်များများဟာကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အကြောင်းကို Cross-Section ဒီဇိုင်းများနှင့်အခြအတွက်ဦးနှောက်သိပ်သည်းဆ Scan ဖတ်ပေါ်အုပ်စုများကိုဖန်ဆင်းမရနိုငျနှိုင်းယှဉ်။ ဥပမာအားဖြင့်, pedophilia တစ် 2007 လေ့လာမှုသူတို့ရဲ့ကိုးကား  ဆက်စပ်မှုဒေတာကိုသုံးကြောင်းကိုသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှူဦးနှောက်ထဲမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ခန္ဓာဗေဒပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ " ဒီလိုကျုံ့အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. ပြသနိုင်လျှင်ပင်က function အယှက်မယ်လို့မတိုင်မီမည်မျှကျုံ့အမှန်တကယ်လိုအပ်သောလိမ့်မယ် (အမူအကျင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေဖို့လုံလောက်တဲ့ပြင်းထန်ဥပမာ, ဦးနှောက်ပျက်စီးခြင်း) ပေးထားသောတစ်ဦးချင်းစီ? ပုံရိပ်မှတဆင့်အကဲဖြတ်နှောက်ကျုံ့ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုနှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်ယူဆထို့ကြောင့်တစ်ခုစွဲလမ်းလုပ်ငန်းစဉ်၏သက်သေအထောက်အထားများကြောင်းအဆိုပါအယူအဆပြဿနာများစရာတွေတစ်ဦးရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, ကောင်းစွာနှောက်ကျုံ့ပုံမှန်အိုမင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပြီးတော့ကြှနျုပျတို့အားလုံးအဟောင်းကြီးထွားလာဖို့ "စွဲ" နေကြသည်တစ်ခုစွဲလမ်းလုပ်ငန်းစဉ်၏သက်သေသာဓကဖြစ်စဉ်းစားသည်ဆိုပါကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်မြဲမြံစွာတည်သည်။ [တစ်ဦးဆက်စပ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုသရုပ်ဖော်, Miner နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ၏ပုံရိပ်လေ့လာမှု5] ဟီလ်တန်နှင့် Watts တို့ကဖျောလိင် compulsive လူနာနမူနာများ၏အများစုအရက်အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခိုနေတဲ့သမိုင်းရှိခဲ့တယ်နှင့်မျှမတို့ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရွယ်ရောက်ပြီးသူ ADHD နှင့်အတူလူနာတွေအတွက်ထိန်းချုပ်စေခဲ့ပေးထားသော "ညစ်ညမ်းစွဲ" ပေါ်တွင် neuroscientific အမြင်များကိုထောကျပံ့ဖို့နည်းနည်းပါဘူး။ ရလဒ်အနေနဲ့ကလေ့လာမှုမှာ Impulse ၏အစီအမံအပေါ် cortical ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် hypersexuality, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြီးသားတိုကျရိုကျလိုငွေပြမှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့လူသိများသည်အခြားရောဂါဗေဒနှင့်ပတ်သက်သောခဲ့ကြသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အ Miner လေ့လာမှုဘာသာရပ်မဆိုအထူးသအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူပြဿနာများရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းပို့ခဲ့ပါဘူး။ စုပေါင်းဟီလ်တန်နှင့် Watts တို့က neuroimaging လေ့လာမှုများမှကိုးကားအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမျဉ်းပြိုင်ထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာ-related မမှန်ကဲ့သို့သောအခြား maladaptive အပြုအမူပုံစံများမိမိတို့၏အခိုင်အမာထောက်ခံကြောင်းသို့မဟုတ်အပြုအမူကမောက်ကမဖြစ်မှုမှဦးဆောင်ဦးနှောက်အတွက်သိသာထင်ရှားသောကျုံ့ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏တောင်မှစာရေးဆရာများထိုကဲ့သို့သောအခြ drawing မှရှောင်ကြဉ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Franklin et alနိုင်ငံပိုင် " ... ဒီလေ့လာမှုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမူမမှန်များ၏ etiology ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ပါ။ အဆိုပါလေ့လာတွေ့ရှိကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်စေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇစိတ်ပိုင်းဖြတ်, ဒါမှမဟုတ်နာတာရှည်ကင်းချေမှုန်းရေး၏သက်ရောက်မှု၏ရလဒ်, ကမောက်ကမဖြစ်မှု preexisting နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ "
ဟီလ်တန်နှင့် Watts သူတို့အစားလေ့လာမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးအစီရင်ခံအမျိုးမျိုးသောရလဒ်များအတွက်အများအပြားယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ရှင်းလင်းချက်အကဲဖြတ်ထက်၎င်းတို့၏အမြင်များကိုထောကျပံ့ဖို့ကိုးကားလေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက် skewing အပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ပုံရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အတော်ကြာရှင်းလင်းချက် [သည့် 2006 လေ့လာမှုအတွက်အနိမ့်သိပ်သည်းဆတိုကျရိုကျကိစ္စများ၏တွေ့ရှိချက်အဘို့တည်ရှိ6] မကြာခဏအဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီမှာတွေ့ရှိအင်ဆူလင်သို့မဟုတ် leptin ခုခံ၏ dysregulation အပါအဝင်အဝလွန်ဘာသာရပ်များအပေါ်။ ဒါဟာကျန်းမာတဲ့ပိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအဝလွန်ဘာသာရပ်များ၏ prefrontal အမှု၌အောက်ပိုင်းသိပ်သည်းဆ, (ဒီလေ့လာမှုကိုသရုပ်ပြဖို့ဒီဇိုင်းမဟုတ်ခဲ့သော) တကယ်ကျုံ့၏ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်ပင်လျှင်လည်းမှတ်သားလောက်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့် "မြင်နိုင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသရုပ်ပြသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရပါမည် ဟီလ်တန်နှင့် Watts အဖြစ်သဘာဝ endogenous စွဲ "၌အခိုင်အမာ? သူတို့ကမီးခိုးရောင်ကိစ္စကွဲပြားမှုနှင့်မဆိုဖြစ်နိုင်သောတိုကျရိုကျ neurodegeneration အဆိုပါဘာသာရပ်များအတွက်အဝလွန်ခြင်း predated သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇသို့မဟုတ်ဇီဝမိုးရွာသွန်းမှုအန္တရာယ်အချက်များတစ်ခုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပါပြီနိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျစ်လျူရှု။ အမှန်စင်စစ်ဖျောအချက်အလက်များ၏အများဆုံး parsimonious ရှင်းပြချက်တိုကျရိုကျလိုငွေပြမှုသည်ဆင်းရဲသောသူဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်တစ်ဦးချင်းစီလက်တွေ့အခြေအနေအလွန်အကျွံအလိုလိုကျလှနျးခွငျးဝိသေသမှ preexisting နှင့်ဦးဆောင်နေတဲ့စွန့်စားမှုအချက်, ဆိုလိုသည်မှာဖြစ်မည်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Schiffer တစ်နှစ်သက်သောရှင်းပြချက်ဖြစ်ပေါ်လာသော et al, သူကို-ဆန့်ကျင်အစောပိုင်း neurodevelopment သူတို့လေ့လာ pedophiles များအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်အစေခံသောဦးနှောက်ကွဲပြားမှုမှဦးဆောင်ပြုလုပ်ဟီလ်တန်နှင့် Watts '' အနက်ကို-ယူဆချက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့မှောက်ချို့ယွင်းမှုကြောင့်လူများအားမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှု၊ အကျင့်ပျက်မှုဖြေရှင်းမှုပုံစံများ၊ တရားစီရင်ခြင်းညံ့ဖျင်းခြင်း၊ စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းများကိုလူအများအားထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆကိုကျွန်ုပ်တို့ပွင့်လင်းမြင်သာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအများအပြားရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများနှင့်အတူအမှုအဖြစ်ပြaticနာအပြုအမူ။ သို့သော်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှုကိုတွက်ချက်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်လေ့လာမှုများမရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောကမောက်ကမဖြစ်မှုအပြုအမူများသည်ဘုံတိုကျရိုကျသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်ဖော်ပြရန်ထိုက်တန်သည့်မည်သည့် cortical atrophy သို့ ဦး တည်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလွယ်တကူစကားလက်ဆုံပြောဆိုရန်ယူဆရန်ခက်ခဲသည်။ ၀ တ္ထုများပါ ၀ င်သည့်အခါ (ဥပမာ - ဦး နှောက်ဆဲလ်များကိုပျက်စီးစေသည့်ကိုကင်း၊ သွေးမြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ် lipid အဆင့်မြင့်ခြင်း) သည်အကြောင်းတရားယန္တရားသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုထိရောက်စေနိုင်သော်လည်းထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောအရာ ၀ တ္ထုမဟုတ်သောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ခန့်မှန်းရခက်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးသောလိင်တုံ့ပြန်မှုသံသရာသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ endogenous neurochemical response များကိုလည်းလုပ်သည်။ လူအများစုသည်တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်များစွာစားလေ့ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားပါကဟီလ်တန်နှင့် Watson တို့ကအစာစားခြင်းအပြုအမူ၏မြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုသည်အဝလွန်သူများအတွက် ဦး နှောက်ရောဂါဗေဒကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်အလုံအလောက်ကွဲပြားကြောင်းအကြံပြုနေပါသလား။ အလားတူစွာသူတို့သည်ကျယ်ပြန့်သောလေ့ကျင့်ခန်းများမှပြေးသူတစ် ဦး သည် ဦး နှောက်ကိုပျက်စီးစေသည်ဟုသူတို့ငြင်းခုန်ကြမည်နည်း။ ပုံစံ၊ ပိုလျှံခြင်း၊ သိမြင်မှုဆိုင်ရာဆုလာဘ်များစသည်တို့ပါ ၀ င်သည့်သတ်မှတ်ချက်များကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာရှင်းပြရန်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများအတွက်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
ကျနော်တို့ dysregulated ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ် hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူလူနာအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်လိုငွေပြမှုနှင့် frontostriatal စနစ်များ၏လေ့လာမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံထိုက်ကြောင်းကိုဟီလ်တန်နှင့် Watts နှင့်အတူသဘောတူညီချက်၌ရှိကြ၏။ Hypersexual Disorder (HD ကို) အတွက်အဆိုပြုထားသော DSM-5 စံအသုံးပြုခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနအဖွဲ့ကရောထွေးတွေ့ရှိချက်လြှော့ကြပြီနှစ်ခုထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာ, (အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းပြဿနာများနှင့်အတူရှိသူများအပါအဝင်) hypersexual ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက် neuropsychological Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံသုံးပြီးကျနော်တို့အလုပ်အမှုဆောင်လိုငွေပြမှုဒီလူဦးရေအတွက်မတည်ရှိစေခြင်းငှါအချို့သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့သည်။ [9အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ဘုံတိုကျရိုကျလိုငွေပြမှုမှအထိခိုက်မခံ neuropsychological စမ်းသပ်မှုအပေါ်အကဲဖြတ်သောအခါ] သို့သော်လည်းအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှု hypersexual လူနာများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်။  ကျနော်တို့အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပါအဝင် hypersexuality, activated သောအခါ, ဥပမာ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနဲ့သင်ယူအပြုအမူတွဲကြောင်း, တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue သို့မဟုတ်အခြားလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောအခြေအနေတွင်တိကျတဲ့ဖြစ်ရပ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သီအိုရီကိုထောကျပံ့ဤတွေ့ရှိချက်များအနက် ထိုကဲ့သို့သော) HD ကိုများအတွက်လက်ရှိ DSM-5 စံအတွက်အဆိုပြုခဲ့ပြီးအဖြစ် dysphoric စိတ်ဓါတ်များသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်ပေါ်ထွက်လာသော။ မည်သို့ပင်, အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် hypersexuality ပေါ်ရှိလက်ရှိစာပေထိုကဲ့သို့သောဓာတုမှီခိုအဖြစ်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအဖြစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပြဿနာများနှင့်အတူလူနာအကြားစွဲလမ်းမမှန်များအတွက်အကူအညီရှာကြံလူနာအကြားလေ့လာမှုများတှငျတှေ့သောသူတို့၏ထံမှအများအပြားပတ်သတ်ပြီးကွဲပြား။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းပြဿနာများနှင့်အတူရှိသူများအပါအဝင် hypersexual ယောက်ျား၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ profile များကိုပေါ်မှာငါတို့သုတေသန, စွဲလမ်းညွှန်းကိန်းအပေါ်ဓာတ်လှေကားသက်သေအထောက်အထားကိုရှာဖွေရန်ပျက်ကွက်ပေမယ့်အစားစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးလိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်အတူလူဦးရေအတွက်ဘုံဝိသေသလက္ခဏာများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။  ဤတွေ့ရှိချက်များညစ်ညမ်းပြဿနာများနှင့်အတူ hypersexual လူနာတစ်ဦးကွဲပြားသောလူဦးရေကိုကိုယ်စားပြုနှင့်အခြားစွဲလမ်းမမှန်နှင့်အတူအပြုအမူသည်ဤပုံစံများအုပ်စုဖွဲ့စေခြင်းငှါအကြံပြုပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုကင်းမဲ့တဲ့အချိန်မတန်မီနိဂုံးချုပ်ရှိပါသည်။
dopaminergic နျူကလီးယပ် accumbens ၏ mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွက်ဂီယာ, prefrontal cortex, နှင့်ပျော်မွေ့ဆုလာဘ်သည့်စနစ်နှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားဦးနှောက်ဒေသညစ်ညမ်း activation အပေါ်ဟီလ်တန်နှင့် Watts အမြင်များဒီစနစ်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများမျိုးစုံပေးထားသောအဓိပ္ပါယ်ရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပူဇော်မထားဘူး။ အဆိုပါ NCAA ဘတ်စကက်ဘောကစား-off အကဲခတ်ဖွယ်ရှိအများအပြားတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အလားတူ neurochemical ဖြစ်စဉ်များဆီသို့ဦးတည်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့သည်ပင်ကစား-off ကြည့်ရှုဖို့စပ်လျဉ်းအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပြီးကျွန်တော် TV ကိုအချိန်လဲလှယ်အတွက်အရေးကြီးသောတာဝန်များကိုယဇျပူဇျောဖို့လိုလိုလားလားဖြစ်နိုင်သည်။ အနည်းငယ်ပင်အလုပ်ခွင်ထဲမှာသင့်လျော်သောအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကြောင်းကိုကော်ပိုရေးရှင်းမူဝါဒများဖြစ်နိုင်သမျှချိုးဖောက်မှုများကြားမှအလုပ်မှာနေစဉ်ကစား-off အကြောင်းကိုအွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းခုခံတွန်းလှန်နိုင်ခြင်းခံစားရပေမည်။ ကျနော်တို့အပြုအမူ၏ထိုကဲ့သို့သောပုံစံများဟာ mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွက် dopaminergic ဂီယာကိုသက်ဝင်ဖို့သူတို့ရဲ့အလားအလာကြားဆက်ဆံရေးပေးထားတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါဖွဲ့စည်းကြောင်းကောက်ချက်ချဖို့ရှိပါသလား တနည်းအားဖြင့်ကျနော်တို့သိသိသာသာအထောက်အထား, ဤဒေသများတွင် dopamine လွှတ်ပေးရန်အကျိုးကိုယန္တရားတွေနဲ့ဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါကြောင်းအကြံပြုကြောင်းရှင်းလင်းဖို့ပိုနှစ်သက် se နှုန်းဒါပေမယ့်အစားကပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အသစ်သို့မဟုတ်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုများရှိနေခြင်းမှဦးနှောက်သတိပေးအမြဲအလားအလာဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်မရကြောင်းတစ်ခု arousal လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။  ထို့နောက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့ခြင်းမှတုန့်ပြန်တွင်ဤဦးနှောက်ဒေသများတွင် dopamine မဆိုလွှတ်ပေးရန်အလွန်ကောင်းစွာကြောင့်ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှု၏အသစ်အဆန်းမှဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ဖွယ်ရှိခေါ်ဆောင်သွားအကြောင်းအရာရင်တော့မှားမယ်တစ်ဦးချင်းစီအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောပစ္စည်းဝါရင့်စားသုံးသူများအတွက်ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။ မည်သို့ပင်ကြောင့်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါကြောင်းကိုမည်သည့်သက်သေအထောက်အထားနှင့်အတူစာဖတ်သူများပေးမထားဘူး။
ဟီလ်တန်နှင့် Watts ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက် copulating အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးမြှင့်ΔFosBအကြောင်းကိုစာပေကိုးကားဖို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်အဘယျကွောငျ့အကြှနျုပျတို့ကိုမှမရှင်းလင်းခဲ့, သင်၏စာဖတ်သူများ၏ဖြစ်ကောင်းအချို့။ ဤရွေ့ကား hypersexual ကြွက်လိင်-လိုက်စားလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ထဲမှာမ autoeroticism အတွက်အမျိုးသမီးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကြွက်လေ့လာမှုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပေမဲ့ကျနော်တို့ကအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းမှ masturbating လူသားအလားတူဖြစ်ပြီး, အရှင်ဟီလ်တန်နှင့် Watts တို့ကကိုးကားရလဒ်များ၏အစဉ်အဆက်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ကြောင်းအယူအဆအငြင်းပွား။ ထို့အပြင်သဘာဝဆုလာဘ် (ဥပမာလိင်) ကိုတုံ့ပြန်မှုအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBသော induction ၏ဒီဂရီမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအကြားဖြစ်နိုင်ခြေကွဲပြားခြားနားမှုမဟုတ်ဘဲတူညီ, အကြံပြုခြင်းမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်၏လေ့လာမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာထက်သိသိသာသာလျော့နည်းခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်အဆိုပါ accumbens အတွက်ΔFosB၏အရေးပါမှုကိုလိင်ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်သုတ်ရည်လွှတ်ဘို့အနည်းပါးလာ intromissions လိုအပ်ရှိရာ၎င်း၏ဆိုးကျိုးများအတွက်ကန့်သတ်ခံရဖို့ထင်ရှား။ , အထူးသ, တိုးမြှင့ΔFosBနှင့်ဆက်စပ်ဆယ်လူလာအပြောင်းအလဲများကိုလည်းအပျော်အပါးသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်အပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့သက်ဆိုင်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုများကျယ်ပြန့်မျိုးစုံနှင့်ထိတွေ့ဆဲလ်၌တွေ့နေကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဖိအား, သင်ယူမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်မှတ်ဉာဏ် evoked ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီ။  ΔFosBမကလူ့လေ့လာမှုများအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းပြဿနာများနှင့်အတူလူနာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားနှင့်စွဲလမ်းပုံမမှန်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းပြဿနာများအကြားဇီဝမျဉ်းပြိုင်အထောက်အထားပေးနိုင်ရန်အတွက်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သုတေသနလုပ်ငန်း generalizing နောက်တဖန်တခါဖြစ်ပါသည်, သိပ္ပံနည်းကျမှန်းဆမရ။
ဟီလ်တန်နှင့် Watts ၏အမြင်များနှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုဆိုလိုဘာအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သား၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည် စှဲမွဲမှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနအဖွဲ့က, အခြားသူများနှင့်အတူ [တခြားနေရာကဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ7-10] တ္ထုများစွဲပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်စပ်လျဉ်းလေ့ကျင်းပအတွေးအခေါ်များမှခွဲထွက်ကြောင်း hypersexuality နှင့်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအမျိုးမျိုးရှုထောင့်အပေါ်။  အဆိုပါ Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ (DSM-IV-TR)  လုံးဝမယ့်အစားပစ္စည်း-Related Disorders ရည်ညွှန်းဟူသောဝေါဟာရကိုရှောင်။ ဒီဇိုင်းအားဖြင့်ပြဿနာအမူအကျင့်ပုံစံများတခြားနေရာအဆိုပါ DSM အတွက်ကုသနေကြသည်။ လာမည့် DSM-5 ခုနှစ်, HD ကိုသစ်တစ်ခုအမျိုးအစားဖြစ်နိုင်သမျှပါဝင်များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနအဖွဲ့သည်လက်ရှိကယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်နိုင်ရှိမရှိတည်ဆောက်၏တရားဝင်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အဆိုပြု HD ကိုစံတစ်ခုလွတ်လပ်သော DSM-5 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးပို့ချနေသည် ရောဂါ။ ဤအမှုအပေါ်ဟီလ်တန်နှင့် Watts ကြေညာချက်သင့်ရဲ့စာဖတ်သူများမှအတန်ငယ်အထင်မြင်မှားစေသောဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ဟာလာမည့် DSM-5 "ဒီသစ်ကိုထို့အပြင်ပြဿနာ, compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပါဝင်သော HD ကို၏ရောဂါအတွက်ပါရှိသည်။ " အဲဒီဖော်ပြရှင်းလင်းချက်တစ်ဦးပွိုင့်နှင့်အမျှတစ်ဦးရောဂါအဖြစ် HD ကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ချက်သေးဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ ဒါပေမယ့်လေ့လာမှုအောက်ရှိအဓိပ္ပာယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစှဲ, compulsive, ဒါမှမဟုတ် obsessive မှ allusions မပါဝင်ပါဘူးသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ ထို့ကြောင့်အချို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းစွဲသို့မဟုတ်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲစကားပြောဘုံဖြစ်သော်လည်းတွေ့ရှိချက်များဆုံ၏မရှိခြင်းအလွန်အကျွံအပြုအမူပုံစံများကိုအခြားအတန်းဖို့ဆက်သွယ်မှုနေဆဲဖြစ်ကြောင်းကျသော, တစ်ဦးထက်ပိုသောကျိုးနွံနှင့်သတိထားအနေအထားကိုယူတိုးပွားလာခဲ့သည် လေ့လာမှုအောက်တွင်။ နောက်ထပ်တစ်ခုစွဲပါဝငျအရာကို delineation မျှသဘောတူညီခဲ့-အပေါ်သို့ထားပါတယ်စံ။ ထို့ကွောငျ့ဟီလ်တန်နှင့် Watts သူတို့ကတစ်ဦး "သဘာဝ endogenous စွဲရှိခြင်းကဲ့သို့သောအဝလွန်ဘာသာရပ်များမှကိုးကားအဖြစ်သူတို့ကိုးကားလေ့လာမှုအတွက်သင်တန်းသားများကိုသက်ဆိုင်သုံးပါအဖြစ်သူတို့သုံးပါနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုအဘယ်အရာနှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းရန်မကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုဖန်ဆင်းကြောင်းအထူးသဖြင့်ပြဿနာဖြစ်လာ, "ပင်သော်လည်းဘာသာရပ်များမမှန်အစာစားခြင်းအပါအဝင်စိတ်ရောဂါမမှန်, အခမဲ့ဖြစ်ပြခဲ့ကြသည်။
၎င်းတို့၏အလုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေဖန်မှုများရှိနေသော်လည်း, ငါတို့ဟီလ်တန်နှင့် Watts အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူပြဿနာများပြလူနာတိုးချဲ့အသိအမြင်ဆောင်ကြဉ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုဖန်ဆင်းသောတိုက်တွန်းပါသည်။ ကျနော်တို့အပြုအမူ၏ထိုကဲ့သို့သောပုံစံများရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်ပူးတွဲဖိုင်ကိုပေါက်ကွဲထွက်, အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲအပါအဝင်မြောက်မြားစွာအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်း, သဘောတူနှင့်သရုပ်ပြတွေ့ရှိချက်ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျးအများကြီး hypersexual အပြုအမူများနှင့်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းပြဿနာများအတွက်အကူအညီရှာကြံလူနာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ neuroscience ဒီဖြစ်ရပ်ဆန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောပံ့ပိုးမှုများရှိသော်လည်းထိုကဲ့သို့သုတေသနပူဇော်ဖို့အလားအလာဤအချိန်တွင်ချို့တဲ့သောရှိပါတယ်။ အဆိုပါဟီလ်တန်နှင့် Watts ဆောင်းပါး၏သေံနဲ့ content အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းပြဿနာများကိုဦးနှောက်မူမမှန်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုတှငျတှေ့သောသူတို့၏ paralleling cortical ကျုံ့စေကာစွဲလမ်းရောဂါဖွဲ့စည်းကြောင်း neuroscientific သုတေသနအပေါ်အခြေခံခိုင်မာတဲ့နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိယုံကြည်ဖို့စာဖတ်သူများလှည့်ဖြား။ ထိုကဲ့သို့သောအခိုင်အမာဟီလ်တန်နှင့် Watts တို့ကကိုးကားလေ့လာမှုအားဖြင့်မှန်းဆခြင်းနှင့်ကလက်ခံကြသည်။ အနာဂတ်သုတေသနထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများ substantiates ရင်တောင်ထိုသို့သောရလဒ်များမှာဒီလူဦးရေ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော၏တသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်ပေးထားအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းပြဿနာများနှင့်အတူအားလုံးလူနာယေဘူယျမည်ဖြစ်ကြောင်းမြင့်မားမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့စွဲမော်ဒယ်များဒီလူဦးရေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ် hypersexuality နှင့်ညစ်ညမ်းပြဿနာများနှင့်အတူလူနာအားဖြင့်ကြုံတွေ့ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စများ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်း၏သိပ်ရိုးရှင်းတဲ့တစ်ဦးအမြင်ပူဇော်စေခြင်းငှါယုံကြည်ပါတယ်။ ကြားဖြတ်အစိုးရမှာတော့လက်ရှိသုတေသနတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းပြဿနာများ conceptualizing များအတွက်အနည်းငယ်သာထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ်။ ညစ်ညမ်းပြဿနာများနှင့်အတူသည်းခံစိတ်သို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်း, မျိုးဗီဇအသင်းအဖွဲ့များနှင့် hypersexual လူနာ neuroimaging အပေါ်သုတေသနဤအချိန်တွင် Non-တည်ရှိဖြစ်ကြသည်။ အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းပြဿနာများကိုလာမည့် DSM-5 အတွက် HD ကိုခွဲခြားများအတွက်လက်ရှိအဆိုပြုထားစံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသော်လည်း, လယ်ပြင်စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကထိုကဲ့သို့သောခွဲခြားခိုင်လုံသောသို့မဟုတ်ပါကယုံကြည်စိတ်ချရရောဂါရနိုင်မယ်ဆိုရင်ရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ ဟီလ်တန်နှင့် Watts ၏အမြင်များအချို့မှဆွဲဆောင်ခံရနိုင်ပေမဲ့, သူတို့မှ neuroscience သုတေသန attribute တွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထောကျပံ့သို့မဟုတ်အတည်ပြုရန်မှာသူတို့ရဲ့ဆောင်းပါးသုံးပြီး၌သင်တို့၏စာဖတ်သူများသတိထား။ စုပေါင်းသူတို့၏အမှားများကို, အစားထောက်ခံမှုထက်အနာဂတ်သုတေသနများအတွက်လေးနက်သောယူဆချက်ကွာဟနှင့်ထံမှ detract ဖြစ်ကြသည်။ ဒီလိုလူနာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အတွက်အနည်းဆုံးကုသမှုရှာသောသူတို့အဘို့, လုပ်ငန်းခွင်လူမှုရေးနှင့်အခြားအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်မကြာခဏလက်ထောက်ကမောက်ကမဖြစ်မှု, စစ်မှန်တဲ့ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်သိသာထင်ရှားသောလက်တွေ့ဒုက္ခဆင်းရဲအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လုံလုံလောက်လောက်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဦးနှောက်ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်အခြား neuropathology မှဦးဆောင်ကြောင်းအကြံပြုအားဖြင့်လူသိများအန္တရာယ်များကိုကားရန်မအကြောင်းပြချက်ကြည့်ပါ။ ဝန်ခံရမည်အချို့လူ့လိင်၏သဘာဝ outgrowth အဖြစ်မည်သည့်မျိုးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပယ်ချရန်ကျရောက်နေတဲ့ပါ၏ သို့သော်လေ့လာနှင့်ဤအစွန်းရောက်ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူတို့အားအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းသူတို့၏ပြဿနာအပြုအမူတွေကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ရပ်တန့်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ပျက်၎င်းတို့၏အသိအပါအဝင်, ဤလူတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်ကြုံတွေ့အခက်အခဲများ, ကောင်းစွာသတိပြုမိကြသည်။
1. စာသားတည်းဖြတ်မူ (DSM-IV-TR) 4th ed ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: စာရေးသူ၊ 2000 အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း။ စိတ်ရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်။
et al 2. Franklin TR, Acton PD, Maldjian ဂျေအေ, Grey က JD, Croft JR, Dackis, CA ။ ကိုကာကိုလာလူနာများ၏ insular, orbitofrontal, cingulate နှင့်ယာယီ cortices အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 51: 134-42 ။ [PubMed]
၃။ Hilton DL, Watts C. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ရှုမှု - အာရုံကြောသိပ္ပံရှုထောင့်။ Surg Neurol Int ။ ၂၀၁၁; ၂း၁၉ ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4. Kalant H. အဘယ်အာရုံကြောဆိုင်ရာဗေဒကစွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားမပြောနိုင်ပါ။ စွဲ 2009; 105: 780-9 ။ [PubMed]
၅။ Miner MH, Raymond N, Bueller BA, Lloyd M, Lim KO ။ compulsive လိင်အပြုအမူ၏ထကြွလွယ်သောနှင့် neuroanatomical ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး။ Psychiatry Res ။ 5; 2009: 174-146 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၆။ Pannacciulli N၊ Del Parigi A၊ Chen K, Le DS, Reiman EM, Tataranni PA ။ လူ့အဝလွန်ခြင်းအတွက် ဦး နှောက်မူမမှန်: တစ် ဦး က voxel-based morphometric လေ့လာမှု။ Neuroimage.6; 2006: 31-1419 ။ [PubMed]
7. Reid RC, လက်သမား BN ။ MMPI-2 ကို အသုံးပြု၍ hypersexual လူနာများအတွက်စိတ်ပညာစိတ်ပညာ၏ဆက်ဆံရေးကိုစူးစမ်းခြင်း။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2009; 35: 294-310 ။ [PubMed]
၈။ Reid RC, Garos S, Carpenter BN, Coleman E. အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့နမူနာမှာအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်။ J Sex Med ။ [စာနယ်ဇင်းများတွင်]PubMed]
၉။ Reid RC၊ Karim R၊ McCrory E, Carpenter BN လူနာနှင့်လူစုလူဝေးနမူနာတွင်အလုပ်အမှုဆောင်၏တာ ၀ န်ယူမှုနှင့် hypersexual အပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။ Int J ကို Neurosci ။ 9; 2010: 120-120 ။ [PubMed]
10. ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး - sensitization သီအိုရီ။ ဦး နှောက် Res ဗျာ 1993; 18: 247-91 ။ [PubMed]
11. Schiffer B, Peschel T, Paul T, Gizewski E, Forsting M, Leygraf N, et al ။ pedophilia အတွက် frontostriatal စနစ်နှင့် cerebellum အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဦး နှောက်မူမမှန်။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2007; 41: 753-62 ။ [PubMed]